Rayson | i-twin bed ne-box spring set
Ngemuva kweminyaka yentuthuko eqinile nesheshayo, uRayson ukhule waba ngelinye lamabhizinisi angochwepheshe futhi anethonya eChina. Amawele amabili kanye nesethi yasentwasahlobo yebhokisi Besitshala imali eningi emkhiqizweni we-R&D, okuvele ukuthi uyasebenza ukuthi sithuthukise imibhede emibili kanye nesethi yentwasahlobo yebhokisi. Ngokuthembela kubasebenzi bethu abasungula izinto ezintsha nabasebenza kanzima, siqinisekisa ukuthi sinikeza amakhasimende imikhiqizo engcono kakhulu, amanani avumayo kakhulu, kanye nezinsizakalo eziphelele kakhulu. Siyakwamukela ukuthi usithinte uma unemibuzo.Idizayini ye-Rayson twin bed kanye ne-box spring set ihlanganisa ububanzi obucatshangelwa kahle. Umbala, ukuthuthukiswa komklamo, ukwakhiwa, i-silhouette, isilinganiso, ukwakhiwa, i-prototyping, nokuhlobisa konke kuyacatshangelwa.